June 12, 2021 - ApannPyay Media
နှလုံးရောဂါမဖြစ်ခင် ၁ လအလိုမှာ သင့်ခန္ဒာကိုယ်က အချက်ပြလေ့ရှိတဲ့ လက္ခဏာ ( ၈ ) မျိူး
June 12, 2021 by ApannPyay Media
နှလုံးရောဂါမဖြစ်ခင် ၁ လအလိုမှာ သင့်ခန္ဒာကိုယ်က အချက်ပြလေ့ရှိတဲ့ လက္ခဏာ ( ၈ ) မျိူး ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ ကြားဖူးကြပါတယ်။ယခုအခါမှာ လူတွေကိုခြောက်လှန့်နေတဲ့ရောဂါများမှာ အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ နှလုံးရောဂါမဖြစ်ပေါ်မီ ကြိုတင်ပြသတတ်တဲ့ လက္ခဏာများကို သိရှိပြီး ကာကွယ်ကုသနိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (1)နွမ်းနယ်ခြင်း၊နုံးချိခြင်း အမျိုးသမီးများမှာ ပိုမိုဖြစ်လေ့ရှိပြီး ရဝရာနှုန်းလောက်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ သာမာန် ကိုယ်ခန္ဒာနွမ်းနယ်ခြင်းတို့ဟာ ညအိပ်ရာဝင်လို့ အနားယူသောအခါ ပြေပျောက်ပေမယ့် နှလုံးရောဂါကြောင့် နွမ်းနယ်ခြင်းကတော့ ညအိပ်ရာဝင်လေပိုဆိုးလေ ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန် အိမ်မှုကိစ္စများ ပြုလုပ်လျှင်တောင်မှ မောပန်းနွမ်းနယ်နေတယ်ဆိုပါက ဆေးကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။ (2)ဗိုက်နာခြင်း 50ရာနှုန်းသော နှလုံးရောဂါများမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ဗိုက်မအီမသာဖြစ်ခြင်း,အစာမကြေခြင်း,ဗိုက်ပြည့်နေတယ်ခံစားရခြင်းစတာတွေအပြင် ပျို့အန်ခြင်းကိုပါခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဗိုက်နာခြင်းဟာ ကိုယ်လက်လှူပ်ရှားမှုပြုလုပ်သောအခါ ပိုဆိုးတတ်ပါတယ်။ (3)ညအိပ်မပျော်ခြင်း ၅ဝရာနှုန်းမှာ တွေ့ရပါတယ်။ညအိပ်မပျော်ခြင်းဆိုရာတွင် အိပ်ဖို့အစပျိုးမှုခက်ခဲခြင်း,မကြာခဏနိုးခြင်း,အစောကြီးနိုးခြင်းတို့အပြင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုလွန်ကဲခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်။ (4)အသက်ရှူမဝခြင်း မောခြင်း၊အသက်ရှုမဝခြင်းတို့ဟာ … Read more
အိမ်သာတက်ရင်း ဖုန်းသုံးတာက လိပ်ခေါင်းဖြစ်စေနိုင် နည်းပညာကမ္ဘာကြီးမှာ လူတွေဟာ ဘယ်လိုနေရာမဆိုမှာ ဖုန်းသုံးတာဟာ အံ့သြစရာ မဟုတ်တော့ပါ။ အိပ်သာတက်ရင်းလည်း ဖုန်းသုံးကြတာပါပဲ။ အမှန်တကယ်ကတော့ မကြာသေးခင်က ပြုလုပ်တဲ့ သုတေသနတစ်ရပ်မှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ၅၇ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အိပ်သာတက်ရင်း ဖုန်းသုံးကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီထဲမှာ ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းက အိပ်သာတက်ရင်း ဖုန်းမပါမဖြစ်ဆိုတဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိပ်သာတက်ရင်း ဖုန်းသုံးတယ်ဆိုတဲ့ အရေးဟာ စမ်းသပ်သုတေသနတွေ လုပ်ဖို့တော့ လိုပါမယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဆရာဝန်တွေက သတိပေးလာနေပါတယ်။ အိပ်သာတက်ရင်း ဖုန်းသုံးတာဟာ ကောင်းတဲ့ အကျင့်မဟုတ်ဘဲ ထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သတိပေးလာတာပါ။ အဲဒီလို အိပ်သာတက်ရင်း ဖုန်းသုံးတဲ့ အကျင့်ဟာ လိပ်ခေါင်းရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ ဆရာဝန်တွေက သတိပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဖုန်းယူသွားပြီး အိပ်သာတက်ပြီဆိုရင် … Read more
နောက်တခါ အအေးဗူးတွေ ဘီယာဗူး တွေဖောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်ကိုမဖြစ်မနေသတိရပါ
နောက်တခါ အအေးဗူးတွေ ဘီယာဗူး တွေဖောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်ကိုမဖြစ်မနေသတိရပါ အသက်ကိုဉာဏ်စောင့်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းသင့်အနေနဲ့မဖြစ်မနေသိထားသင့်ပါတယ်တခါတလေ အင်တာနက်သုံးနေရင်းနဲ့ရူးကြောင်ကြောင်သတင်း တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဘယ်လိုမျိုးတွေလည်းဆိုတော့ မိသားစု အကုန်လုံး soda ဘူးဖောက်သောက်ရင်းအဆိပ်သင့်သလိုဖြစ်ပြီးသေသွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလိုမျိုးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခုပြောပြချင်တာက တကယ်သေနိုင်လား?မသေနိုင်ဘူးလား?မသေဘူးဆိုရင်ကောဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်လည်း? ဘယ်လိုရှောင်ကျဉ်သင့်သလည်း?ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုလောက်မေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ရိုးရိုးသားသားဖြေကြတာပေါ့။အိမ်ကနေအဝေးရောက်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ သံဘူးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အအေးတွေ၊ဆိုဒါတွေ၊ဘီယာဘူးတွေကိုသောက်တဲ့အခါမှာ ဒီအတိုင်းဖောက်ပြီးတော့ သံဘူးနဲ့ဘဲသောက်ဖြစ်ကြပါသလား?မဖောက်သောက်ခင်တုန်းက မသန့်ရှင်းမှာစိုးလို့ဆိုပြီး မျက်နှာပြင် တဝိုက်ကို Tissue နဲ့သုတ်မိကြပါသလား?အဲ့လောက်နဲ့သန့်ရှင်းသွားပြီလို့ထင်လိုက်ပါသလား? ကဲ အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအတွက် အဖြေတွေကိုအောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ သံဘူး တွေအကုန်လုံးကို စက်ရုံ ကနေထုတ်လိုက်ပြီဆိုကတည်းက ပလတ်စတစ်တွေနဲ့ထုတ်ပိုးထားခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အခြား ဖုန်တွေ အညစ်အကြေးတွေမတက်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအနေအထားအတိုင်းဘဲ စူပါမားကတ်တွေကိုပို့ဆောင်ပါတယ်။သံဘူးတွေဟာ စူပါမားကတ်တွေရဲ့ အရောင်းစင်တွေမှာရက်ပေါင်းများစွာ ရှိနေတာကြောင့် အချို့သောဖုန်တွေတက်နေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် မသောက်ခင်မှာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတာအကောင်းဆုံးပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် အမှန်တကယ်ကတော့ သံဘူးတွေအရမ်းညစ်ပတ်နေလို့ဆိုပြီး ဆပ်ပြာမှုန့်တွေသုံးပြီးတိုက်ချွတ်ဆေးကြောတာကတော့ လုံးဝမလိုအပ်တဲ့နည်းလမ်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ နောက်တစ်ခါ သံဘူးတွေကိုဖွင့်သောက်တော့မယ်ဆိုရင်အခုပြောမယ့်အချက်လေးတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးပါ။ – သံဘူးကိုသန့်ရှင်းပေးပါ။ … Read more
သင် ကားဝယ်တော့မယ်ဆို ဒါလေးအရင် ဖတ်ကြည့်ပါ
သင် ကားဝယ်တော့မယ်ဆို ဒါလေးအရင် ဖတ်ကြည့်ပါ မျက်မြင် ကား သွားဝယ်မယ့် အမျိုးတွေ အတွေးမမှား ဈေးမများစေဖို့ ဒါလေးဆောင်ထား အကြမ်းအားဖြင့် တော့ မမှားနိုင်တော့ပါ ၁။ ကား ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလင်းရောင် ကောင်းကောင်း ရရှိပြီးအရိပ်အောက်သက်တောင့်သက်သာ ကြည့်နိုင်သောနေရာ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီးနေ့လည့်ခင်း နေပူအောက်ကြည့်ရှု့ခြင်းရှောင်ပါအပူဒါဏ် ပြင်းထန်လွန်းသဖြင့်ကားကြည့်ရှုသောအခါတွင်သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်လို့စစ်ရမှာတွေကျန်ခဲ့တတ်ပါတယ်။ အပူဒါဏ်သက်သာအောင်ဆိုပြီးညနေဘက်နဲ့မိုးချူပ်ပိုင်းတော့ ကား ကြည့်ဖို့မလုပ်ကြပါနဲ့နော်သဘောပေါက်ပါရေထဲ ပိုက်ဆံလွင့်ပြစ်လိုက်ရင်တောင်အသံမြည်ဦးမှာပါ.. ၂။ ကား ကိုတွေ့တာနဲ့ကားထိုင်ခုံခါးပတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါခါးပါတ်ခေါင်းတွေမှာထုတ်တဲ့ ခုနှစ်တွေ အတိအကျရေးထားပါတယ်ဖြဲထားတာမျိုး ၊ကတ်ကြေးနဲ့ ဖြတ်ထားတာမျိုးမဖြစ်ရပါဘူး ကြည့်တာနဲ့တွေ့ရပါမယ်ကားပိုင်ရှင် ပါးစပ်ကဘယ်နှခုနှစ်ပါလို့ အမြုတ်ထွက်အောင်ပြောနေလဲကျွန်တော် တို့မျက်စိရယ် ဦးနှောက်ရယ်နဲ့ဘဲအလုပ်လုပ် ကြရမှာဖြစ်လို့ ကျန်တာတွေ ခဏ မေ့လိုက်ပါ ၃။ ကား ကိုစက်နှိုး ပါ ပြီးတာနဲ့အဲကွန်းဖွင့်လိုက်ပါ စက်သံသည်ဆူညံ ကျယ်လောင် တာမျိုးကိုတော့ ခွဲတတ်ပါစေပြီးလျှင်အဲကွန်းလေအေးမအေး စစ်ပါ ၄။ ကားအစီးတိုင်းမှာ … Read more
ထောပတ်သီးက ဘာတွေကောင်းလဲ ထောပတ်သီးရဲ့ ကောင်းကျိုး တွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်လို သူတိုင်း ထောပတ်သီးလို အသီးမျိုးကို ပုံမှန်စားပေးရင် အကောင်းဆုံး ပါပဲ။ သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အကျိုး ကျေးဇူး တွေကလည်း အံ့ဩစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ တကယ်တော့ ထောပတ်သီးဟာ Berry ဘယ်ရီလို့ ခေါ်သော သစ်သီး မိသားစုမှ ဆင်းသက်လာသည့် မျိုးနွယ်ဝင် သစ်သီးတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ထောပတ် သီးလို့ ခေါ်ကြခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းက မှည့်၍ ပျော့နေသော ထောပတ်သီး အသားများဟာ ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ ကြည့်လိုက်ရင် နွားနို့မှ ထုတ်လုပ်ထားသော ထောပတ်ကဲ့သို့ နူးညံ့သည့် အသားမျိုး (Texture) မို့လို့ ထောပတ်နဲ့ တူလို့ ထောပတ်သီးလို့ အမည်ပေး … Read more
တရုတ်ပြည်က နာမည်ကြီး ဇိမ်ခံဟင်းလျာ… “ဗုဒ္ဓနံရံပေါ် ခုန်ပျံကျော်ဟင်းချိူ”
တရုတ်ပြည်က နာမည်ကြီး ဇိမ်ခံဟင်းလျာ… “ဗုဒ္ဓနံရံပေါ် ခုန်ပျံကျော်ဟင်းချိူ” ဒီဟင်းချိူနာမည်က နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းတယ်နော်။ ဟုတ်ပါတယ် ဒီဟင်းချိူဟာ ချင်းမင်းဆက်ခေတ် (၁၆၄၄ ခုနှစ် – ၁၉၁၂ ခုနှစ်) အတွင်း နာမည်ကြီး လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ ရသာမွန် ဟင်းလျာတစ်မျိူး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဟင်းချိူဟင်းရည်ဟာ ခေတ်အဆက်ဆက် ချမ်းသာသူများအတွက် ဇိမ်ခံဟင်းလျာတစ်မျိူး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဟင်းချိူထဲမှာ ငါးမန်းတောင်၊ ပြည်ကြီးမျှော့၊ ကြာယပ်ခုံးကောင်၊ ကျင်းဟွားဝက်ပေါင်ခြောက်၊ ဂျင်ဆင်းနဲ့ တန်ဖိုးကြီးမှိုပွင့်၊ မျှစ်၊ ငှက်သိုက် စသည်ဖြင့် တတ်နိုင်လျှင် တတ်နိုင်သလောက် ငွေကုန်ကြေးကျခံကာ သောက်သုံးကြတဲ့ ဟင်းချိူရည်တစ်မျိူးပေါ့။ ဒါ့ကြောင့် ဗုဒ္ဓနံရံပေါ်ခုန်ပျံကျော်ဟင်းချိူထဲမှာ ဟင်းလျာအမယ်ပေါင်း အနည်းဆုံး ၁၂ မျိူးလောက်ကနေ အမျိူးအစား (အသီးအရွက်+အသား) ၃၀ ကျော်အထိ ပါဝင်ချက်ပြုတ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ … Read more
သရဏဂုံ အကျိုး ဓားမတိုးပေ
သရဏဂုံ အကျိုး ဓားမတိုးပေ ဒီပဲရင်းမြို့နယ် ကျွန်းရင်းရွာကျောင်းဆရာတော်ဦးဝါယမသည်လည်း သရဏဂုံတန်ခိုးကြောင့်သာလျှင်အသက်ဘေးမှ သီသီကလေးကင်းလွတ်ခဲ့ရသည် တစ်နေ့တွင် အတွင်းဒါယကာများပါသော ဓားပြအဖွဲ့ကျောင်းသို့ဝင်၍ ဓားပြတိုက်ကြသည်။ ဘုရားခန်းမှအဖိုးတန်ပစ္စည်းများကိုယူရုံမကပဲ သူတို့အဖွဲ့ထဲမှအတွင်းလူတယောက်ကိုဘုန်းကြီးကသိသွားသည့်အတွက် လက်စလက်နဖျောက်သည့် အနေဖြင့် ဘုန်းကြီးကိုပါသတ်ပစ်ရန် လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီး ကျောင်းအနောက်ဖက်လျိုကြီးထဲသို့ခေါ်သွားပါတော့သည်။ သတ်မည့်နေရာရောက်သည့်အခါအကြိမ်ကြိမ်လွှတ်ပေးဖို့ရန် အသနာခံသော်လည်း လွှတ်မပေးပေအသနားခံလို့မရတော့မည့်အတူတူ ဘာမှထပ်ပြော မနေတော့ပဲ ဘုရားရှိခိုးခွင့်အချိန်လေးကိုတောင်းလိုက်ပြီး ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်နေကျ သရဏဂုံသုံးပါးကိုယုံယုံကြည်ကြည်ဖြင့် ရွတ်ဆိုကန်တော့လိုက်ပါတော့သည်။ သရဏဂုံသုံးပါး ဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက် မိုးမှောင်ကြီးကျလာပြီး လျှပ်စီးများလက်ကာ ဓားပြတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မိုးကြိုးများ အဆက်မပြက်ပစ်ခတ်ပါတော့သည်။ ဘုန်းကြီးကိုမသတ်နိုင်ရုံမကဘဲ ထုပ်ပိုးထားသောပစ္စည်းများနှင့် လက်နက်များကိုပင် ထားခဲ့ကာဓားပြများ ကိုယ်လွတ်ရုံး၍ မိမိတို့ခြေဦးတည့်ရာအလန့်တကြား ထွက်ပြေးကြတော့သည်။ ဦးဝါယမကိုတုပ်ထားသောကြိုးများလည်းအလိုလိုပင်ဖြေပြီးသားဖြစ်သွားတော့သည်။ “ဓမ္မော ဟဝေ ရက္ခတိ ဓမ္မစာရီ ” စင်စစ်တရားတော်ကိုကျင့်ကြံသောပုဂ္ဂိုလ်အား တရားတော်သည်ပြန်လည်၍စောင့်ရှောက်ပေသည်တကား။ (မေတ္တာရှင်ရွှေပြည်သာ ၏ မျက်ရည်မကျခင်သိစေချင် စာအုပ် စာမျက်နှာ … Read more
မျက်နှာလေး ဝင်းမွှတ်နေဖို့ ပိုက်ဆံမကုန်တဲ့ ပေါင်းတင်နည်းလေးပါ
မျက်နှာလေး ဝင်းမွှတ်နေဖို့ ပိုက်ဆံမကုန်တဲ့ ပေါင်းတင်နည်းလေးပါ အလှပြင် ပစ္စည်းတွေကို ကုန်စုံဆိုင်တွေ အလှပြင် ဆိုင်တွေမှာ တကူးတက ရှာစရာမလိုပါဘူး။ တကယ်တော့ ကျွန်မတို့ နေ့စဉ် စားသုံးနေတဲ့ အစားအစာတွေဟာ အလှအပ ပစ္စည်းတွေပါပဲ။ အမျိုးသမီးတိုင်း နူးညံ့ပြီး လှပစိုပြေတဲ့ အသားရေမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လား။သိပ်သေချာတာပေါ့။ အသားအရေကိုနုပျို စိုပြေစေဖို့ ဂျပန်နိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဒီကနေ့မှာ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။အရမ်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး တကယ်လည်းအကျိုးထူးတာမို့ စာဖတ်သူတို့အတွက် အဆင်ပြေမှာပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်း ဆန် စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ ဇွန်း ကနေ ၄ ဇွန်းထိ ပျားရည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း နွားနို့ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ပြုလုပ်နည်း ဆန်ကိုရေအေးနဲ့ … Read more
ရခိုင်တွင် ပိန္နဲသီးအထဲမှ ငှက်ပျောသီးများ ထူးဆန်းစွာထွက်ပေါ် ဝင်သာဖတ်ကြည့်တော့ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ် ကျောက်တန်းကျေး ရွာအတွင်း ပိန္နဲပင်ရှိပိန္နဲသီးတစ်လုံးအထဲမှ ငှက်ပျော သီးများ ထူးဆန်းစွာ ထွက်ပေါ် လာသည်ဟုဆိုကာ လူများသွားရောက်ကြည့်ရှုနေကြသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ ကျောက်တန်းကျေးရွာရှိ ဒိုင်းနက်ရွာချေမှ ဦးထွန်းဝေ၏ အိမ်ခြံဝင်းမှ ပိန္နဲပင်ရှိ ပိန္နဲသီးတွင် ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ၁၄ ရက်နေ့ သြင်္ကန်ကာလအတွင်းက ငှက်ပျောသီး ၁၃ သုံးလုံးပါ ငှက်ပျောသီးတစ်ဖီးမှာ ထူးဆန်းစွာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းနေရာသို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိကျောက်တော်မြို့နယ်ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်နှင့် မြောက်ဦးမြို့နယ်အပါအဝင် တခြားမြို့ နယ်အချို့တို့မှ ဆိုင်ကယ် ကားများဖြင့် တစ်နေ့ တစ်နေ့ လာရောက် ကြည့်ရှုကြသူများပြားနေကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်မှာ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင်လည်း ပျံ့နှံ့လျှက်ရှိသည်။လက်ရှိတွင်ယင်းကျေးရွာသားများကအဆို ပါ ပိန္နဲပင်အောက်၌ တရားပွဲဖြင့်အမွှေးနံ့သာများထွန်းကာ ပူဇော်ထားရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။ … Read more
လူသိနည်းပြီး သတိမမူမိကြတဲ့ မိမိအိမ်မှာ အမြဲသန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတဲ့ တံမြက်စည်းနိမိတ်
လူသိနည်းပြီး သတိမမူမိကြတဲ့ မိမိအိမ်မှာ အမြဲသန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတဲ့ တံမြက်စည်းနိမိတ် လူသိနည်းတဲ့ တံမြက်စည်းနိမိတ် တွေကို ဗဟုသုတ အနေနဲ့ ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အရမ်းကြီး အယူအစွဲကြီးတာ မကောင်းပေမယ့် ရှေးက အယူအဆတွေ ဘယ်လို ရှိခဲ့သလဲ ဆိုတာ သိရအောင် မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ အခုခေတ်မှာတော့ ဒီအချက်တွေ အားလုံးကို လက်ခံလို့ မရတော့ပေမယ့် တစ်ချို့ သတိထားရမယ့် အလျက်လေးတွေလည်း ပါဝင်နေတာ ဖြစ်လို့ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ၁။ အပျိုတွေ တံမြက်စည်း ကျော်မိရင် အိမ်ထောင်မကျခင် ဗိုက်ကြီးတတ်ပါတယ်။ ၂။ အပျို၊ လူပျိုတွေ ခြေဖျား‌ပေါ်ကျော်ပြီး တံမြက်စည်း ခတ်မိရင် အဲ့ကလေးတွေ အိမ်ထောင်မကျတော့ပါဘူး။ တံမြက်စည်းကို တံတွေးနဲ့ ပြန်ထွေးခိုင်းပါ။ ၃။ အိမ်နီး ခြံနီးချင်းတွေ ကိုယ့် အိမ်/ခြံဝကစပြီး … Read more